WebM: Ijikwa usoro vidiyo emeghe na GNU / Linux | Site na Linux
WebM: Jikwaa usoro vidiyo mepere emepe na GNU / Linux
WebM, dị ka WebP, bụ usoro nke oghe emeghe kere Google, ma na nke a maka faịlụ mgbasa ozi, nke ahụ bụ ịsị, vidiyo na-abụkarị. Ọ na-e wepụtara ruo ọtụtụ afọ, ma ọ bụ mgbe mwepụta nke format WebP.
Ihu ọma na-eke WebM lekwasịrị anya melite njikwa nke vidiyo vidiyo na ebumnuche bụ isi ikwe ka mmeputa nke vidiyo fromntanetị site na ngwaọrụ ọ bụla n'ụzọ ka mma.
Formatdị ọhụrụ a WebM ebe ọ bụ na ọ malitere ya e mere maka a ịrụ ọrụ nke ọma na-ike na ike na HTML5. Ke adianade do, ka ojiji nke VP8 na VP9 codecs iji mezuo a bukwanu mkpakọ. N'ụzọ dị otú ahụ na mmịpụta ahụ nwere ike ịrụ ọrụ ọbụlagodi obere ike ngụkọta.
Ọzọkwa, dị ka amaara ọha na eze, YouTube, dị ka enyemaka nke Google, na-atọghata gị niile videos na WebM, n'agbanyeghị ụdị faịlụ mbụ, nke mere na mgbe ebudatara vidiyo nke a bụ usoro ndabara ya.
Matakwu banyere WebP na SiteLinux Nwere ike ịgụ isiokwu ndị gara aga metụtara:
FFmpeg ugbua gunyere nkwado maka WebM
Ọ bụ gọọmentị: FSF kwupụtara nkwado ya maka usoro vidiyo WebM
Tugharia Ogg / Ogv, webm ma obu mkv na Linux site na OggConvert
Na ịgụkwu banyere usoro WebP, nwere ike ịgụ ederede anyị gara aga nke a, a na-akpọ:
WebP: Ijikwa usoro onyonyo emeghe imeghe na GNU / Linux
1 WebM: Mepee usoro vidiyo
1.1 WebM vidiyo thumbnails na Thunar
1.2 Kpọọ ma dezie vidiyo WebM
1.3 Online ngwaọrụ ike (tọghata) videos na WebM
WebM: Mepee usoro vidiyo
Ọkpụkpọ WebM nwere a ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ebe a kọwara ya:
"WebM bụ usoro enweghị akwụ ụgwọ, mepere emepe maka usoro weebụ".
Na mgbakwunye, ọ na-egosipụta na:
"WebM na-akọwapụta nhazi nke akpa faịlụ, vidiyo na ụdị ọdịyo. Faịlụ WebM nwere vidio vidio ejiri VP8 ma ọ bụ VP9 vidiyo kodịpị na iyi egwu egwu nwere Vorbis ma ọ bụ Opus audio codec. Ọdịdị faịlụ WebM ahụ dabere na akpa Matroska".
WebM vidiyo thumbnails na Thunar
M ikpe, ka m na-eji a gbanwetụrụ mbipute nke Linux MX, nke na-eji XFCE Desktọpụ Environment natively, usoro eji nke oma gosiputa thumbnails na Thunar Njikwa Explorer Ọ bụ ndị a:
Fanye ma ọ bụ gosipụta nke ahụ na faịlụ aha ya «ffmpegthumbnailer.thumbnailer» na iwu na-esonụ iwu:
Ntuziaka na-esonụ dị «video/webm» na nhazi nhazi nke na-amalite site «MimeType» Kedu ihe kpatara ọdịnaya ahụ ji dị ka ndị a:
Malitegharịa ekwentị onye ọrụ na nwalee site na imeghe Eke iji lee thumbnails nke ihe oyiyi WebM.
Cheta na: Nyochaa mgbe etinyechara nchịkọta «ffmpeg, ffmpegthumbnailer y libvpx5». Ihe ngwugwu ikpeazụ a nwere ike, dabere na Nkesa na nchekwa, bịa n'ụdị dị iche, ya bụ, «libvpx6 y libvpx7».
Kpọọ ma dezie vidiyo WebM
Maka ọrụ dị otú a, ana m akwado iji ụwa niile ọkpọ vidiyo VLC na ihe nlere vidiyo Pitivi. N'adịghị ka WebP, WebM bụ ihe zuru ụwa ọnụ na Ngwa GNU / Linux, nke ahụ bụ, ọ nwere nkwado ka ukwuu n'ọtụtụ n'ime Ndị na-egwu vidiyo na ndị editọ.
Online ngwaọrụ ike (tọghata) videos na WebM
Ọ bụrụ na, enweghị aka GNU / Linux ezigbo ngwa maka ọrụ dị otú a, ọ bụ ezie VLC arụ ọrụ zuru oke maka ya, yana Mystic, enwere ọtụtụ ezigbo ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji tọghata ọtụtụ ihe, dịka faịlụ faịlụ. vidiyo. Ma kpọmkwem maka vidiyo WebM anyị na-akwado na-agbalị: Ihe Ntụgharị Onlinentanetị.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere usoro ihe eji emeghe vidiyo a na-akpọ «WebM» kere Google ọtụtụ afọ gara aga, yana otu esi ejikwa vidiyo ndị a na usoro a GNU / Linux; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » WebM: Jikwaa usoro vidiyo mepere emepe na GNU / Linux
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke PeerTube 2.3 ma sonyekwa n'okwu ndị ahụ